इमेज साप्ताहिक : 2017-08-06
पैरेवेशी (रसुवा) । रसुवाको पैरेवेशीबाट विस्थापित भएर नुवाकोट मनकामनाको शान्तीबजारमा बसिरहेका नागरिकहरुलाई अहिले सुत्ने ठाउँ बनाउने चटारो छ । आफ्नो हुँदाखादाको घर एकै छिनमा ध्वस्त भएपछि अहिले यि नागरिकहरु त्रिशुली थ्रि ए जलविद्युत् आयोजनाको भवनमा शरण लिएर बसेका छन् ।
साउन २२ गते रातीको पहिरोमा परेर रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा न. ४ पैरेबेंसीमा चार जनाको मृत्यु भयो । पैरेवेशीको आठ घर पहिरोले पुर्यो, १५ घर परिवार पुर्ण रुपमा विस्थापित भए ।
यो पटक सहित गरेर पाँच पटक पहिरो गएको यस पैरेवेशीमा अहिलेको पाली भने पैरोले ताण्डव मच्चाएको छ । बस्ती माथीको घनाजङ्गलको दुई ठाउँबाट बसेको पहिरोले यहाँका स्थानीयहरुमा गहिरो चोट पु¥याएको छ ।
२०७२ सालको भुकम्पले ध्वस्त भएको घर यहाँका नागरिकहरुले भर्खरै ऋणधन गरेर ठड्याएका थिए । कत्तिपयहरु नयाँ घरमा सरेको एक महिना पनि वितेको थिए । एकै घरको चार जनाको निधन भएको पक्की ढलान घरमा त बसाई सरेको चार दिन मात्रै भएको थियो ।
सरकारसंग पहिलो किस्ता रकम मात्रै लिएको र दोश्रो किस्ताको रकम लिन नपाएकाहरुलाई बढि पिडा भएको छ । नयाँ बनेको घर देखाएर बाँकी रकम लिनसक्ने अवस्था अब यहाँका नागरिकहरुको छैन । त्यसो त अब नयाँ घर बनाउनका लागि पनि जग्गा जमिन नभएको स्थानीयहरु बताउछन् । पुर्खा देखि नै यही स्थलमा बसोवास गर्दै आएकोहरुको जग्गा जमिन सबै यही रहेको र अहिले पहिरोले छोपेको कारण घर बनाउने जमिन बसैको पनि बाँकी नरहेको स्थानीयहरुले बताए ।
अहिले त्रिशुली थ्रि ए को भवन शान्तिबजारमा बसिरहेका नागरिकहरु सरकारले आफुहरुलाई कमसेकम घर बनाउने सम्मको जग्गा उपलब्ध गराईदिनेमा आशाबादी छन् ।
पहिरो लगत्तै विस्थापित भएकाहरुलाई अहिले दैनिक गुजाराका लागि समस्या भएको छ । सक्नेले क्षतिग्रस्त घरबाट केही अन्नपात निकाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताइएको छ । माटोको भल पसेको कारण कुनै पनि घरबाट सध्य सामानहरु निकाल्न स्थानीयहरुले सकेका छैनन् । अधिकांश नागरिकहरु आफ्ना वालबच्च लिएर रित्तो हात त्रिशुली थ्रि ए जलविद्युत् आयोजनाको भवनमा शरण लिन पुगेका छन् । अहिले सबैलाई खानेकुराको समस्या भएको पहिरो पिडिहरुले बताएका छन् ।
पैरेवेशी र त्यो भन्दा माथीको गाउँबाट गरी अहिलेसम्म ३५ घरपरिवार विस्थापित भइसकेका छन् । विस्थापित हुनेहरुको संख्या अझ बढ्न सक्ने उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्साल बताउनुहुन्छ । पहिरो बग्ने क्रम चलिरहेको र तल गएको पहिरोका कारण माथिको बस्ती समेत समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले जोखिममा परेकाहरु एकै थलोमा भेला भएर बसेका छन् । बसोवासका लागि त्रिशुली थ्रि ए को भवन पर्याप्त रहेपनि खानेकुरा देखि प्रयोग गर्ने अन्य सामाग्रीहरुको अभाव देखिएको छ । यो अभावसंगै नुवाकोट तथा रसुवा जिल्लामा कार्यरत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुले राहत सामाग्री ल्याउन सुरु गरेका छन् ।
तस्बिरहरु कपिलदेव खनाल । अन्तिमको तस्बिर फेसबुकबाट
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Wednesday, August 09, 2017 No comments:
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटमा को को भिड्दैछन् ? र किन दर्ता भएन पदमराज पौडेलको उम्मेदवारी ?
विदुर, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको लागि आज उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्र गरी दुई प्यानलबाट उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा सन्तमान तामाङको उम्मेदवारी परेको छ । उप प्रमुखमा अप्सरा थापाको उम्मेदवारी परेको छ । उप प्रमुखमा काँग्रेसबाट पदमराज पौडेलले उम्मेदवारी दिने भने पनि प्रमुख या उप प्रमुखमा महिला आवश्यक पर्ने भएकोले महिला सदस्यको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा लगिएको अप्सरा थापालाई उप प्रमुखको उम्मेदवार बनाइएको हो । पार्टी कार्यालबाट पौडेललाई उप प्मुखको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन कार्यालय लगिएको थियो । पौडेलको उम्मेदवारी कामय नहुने भएपछि केहीबेर खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
नौं सदस्यको लागि आउँदो २९ गते हुने निर्वाचनमा १८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । काँग्रेसले एक्लै समुह तयार गरेको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त प्यानल तयार गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यहरुमा खुल्ला तर्फ अभिनव फँुयाल ‘जगदीश’, रामहसिंह तामाङ, र गणेशबहादुर शाहीले काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै काँग्रेसको तर्फबाट महिला सदस्यमा सविना प्रधान, सावित्रि सेढाई र धनमाया तामाङको उम्मेदवारी परेको छ । अल्पसङ्ख्यकबाट माया शेर्पाको उम्मेदवारी परेको काँग्रेस नुवाकोटका प्रवक्ता राजु थापाले जानकारी दिनुभयो ।
एमाले आमोवादी संयुक्त प्यानलबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा रामहरि घिमिरे, उप प्रमुखमा विष्णुबहादुर बोगटी रहनुभएको छ । घिमिरे नेकपा एमालेबाट निर्वाचिन वडा सदस्य हुन् भने बोगटी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । त्यसै गरी खुल्ला सदस्यहरुमा नविन पुडासैनी, नारायणप्रसाद रिमाल, विक्रम गुरुङ्ग रहनुभएको छ । महिला सदस्यमा मिनुकुमारी तामाङ नेपाली, शर्मिला तामाङ, सरस्वती उप्रेतीको उम्मेदवारी परेको छ भने अल्पसंख्यकमा कृष्णबहादुर घलेको उम्मेदवारी परेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उप प्रमुख र बाँकी सात जना सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । जसमा खुल्ला सदस्य र महिला सदस्यबाट तीन÷तीन जना र दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट १ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
नेपाली काँग्रेस नुवाकोटमा केसी र महत गुटको राजनीति सहतमा आएपछि उम्मेदवारी दर्ता हुने समयमा दुवै गुटको एकता भएको कार्यकर्ताहरुले बताएका छन् । काँग्रेसका एक जिल्ला नेताका अनुसार प्रमुखमा महत, उप प्रमुखमा केसीले आफ्ना कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी बनाएका छन् । सदस्यहरुमा महत, केसी र बहादुरसिंह लामा पक्षका कार्यकर्ताहरुलाई भागवडा लगाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि नुवाकोटमा काँग्रेसलाई प्रष्ट बहुमत रहेको छ । २४ जना मतादाता रहेको नुवाकोटमा काँग्रेसको मात्रै १४ मत रहेको छ । एमालेसंग ६ र माओवादीसंग ४ मत मात्रै रहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुखले मात्रै मतदान गर्न पाउने छन् ।
जिल्ला समन्व्य समितिको पदाधिकारी विजयी गराउन प्रष्ट बहुमत रहँदा पनि काँग्रेसमा हिजोसम्म विभाजन देखिएको थियो । काँग्रेसको तीन वटै क्षेत्रिय समितिले सन्तमान तामाङलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउनका लागि लिखित रुपमा पठाएपनि जिल्ला कार्य समितिले भने प्रमुखमा पदमराज पौडेललाई प्रमुखमा उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
महत र केसी पक्षको राजनीतिले विभाजन गरेको काँग्रेस नुवाकोटको जिल्ला समन्वय समितिको चुनालाई काँग्रेसका केन्द्रिय सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो साँझ मात्रै मिलाएका थिए ।
जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरिसिंह केसी र सभापतिका प्रत्यासि रमेश महत सहित गएको काँग्रेसको नेता कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालै उप प्रमुखको उम्मेदवार छान्न हम्मेहम्मे परेको थियो । तर केसी पक्षको भागमा परेको उप प्रमुखको उम्मेदावार छनोटमा जिल्ला सहभापति केसीले नै थापालाई छनोट गर्नुभएको हो ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Monday, August 07, 2017 No comments:
पैरेबेसी (रसुवा) रसुवाको पहिरेवेशीमा गएराति पहिरोमा पुरिएका मध्ये तीन जनाको शव फेला परेको छ । एक जनाको शवको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । गए रातीको पहिरोमा ८ घर पुरिएको थियो भने चार जना वेपत्ता भएका थिए ।
पहिरोमा परी मृत्यु हुनेहरुमा एका घरका सदस्य रहेका छन् । जसमा ७७ बर्षिय धर्मबहादुर थापामगर, ३३ बर्षिय बुहारी मुना थापामगर, ४ बर्षिय नाति रविन थापामगर र घरमा काम गर्ने ७८ बर्षिया भक्तबहादुर नगरकोटी छन् ।
हराईरहेका ४ जनाको उद्धारका लागि स्काभेटर परिचालन गरिएको थियो । सदरमुकाम धुन्चे तथा शान्तिबजारबाट दुईवटा स्काभेटर परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
सदरमुकामबाट गएको स्काभेटर शान्तिबजारमा रहेको स्काभेटरले अबरुद्ध बाटो सुचारु गर्दै घटनास्थलमा उद्धारका लागि गईरहेको बताइएको छ । पहिरोका कारण पहिरेबेशिको करिब ३० घर परिबार बिस्थापित भएको र बिस्थापित परिवारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्लाका सुरक्षा निकायको टोलि राहात रकम तथा सामाग्री लिएर घटनास्थलतर्फ गएका छन् ।
उत्तरगया गाउँपालिका–४ पहिरेबेशिमा राति ९ वजेतिर खसेको पहिरोको कारण ८ घर पुरिएको हो । स्थानिय खड्गबहादुर घले, मुना घले, दिपक घले, कान्छि मगर्नि, देवकि भुजेल, लालबहाखुर थापामगर, गोपालबहादुर थापामगर, हरि घले र यवबहादुर थापामगरमको घरमा क्षति पुगेको छ ।
पहिरोमा परि लालबहाखुर थापा मगर र उहाको श्रीमती बिन्दा थापामगर घाइते हुनुभएको छ । बिन्दाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । दर्जनौंको सङ्ख्यामा पशु पनि मरेको छ । गाउँ पुग्ने सडक समेत पहिलोले बगाएको कारण उद्वारमा जानेहरुलाई समस्या भएको थियो ।
बेपत्ताहरुको सेनाले खोजि गरिरहेको छ । श्रीनाथ गण नुवाकोटबाट खटिएको सेनाले बेपत्ताहरुको खोजि गरिरहेको र पहिरोको दलदलका कारण समस्या भएको श्रीनाथ गणका प्रमुख रोहित गुरुङले बताउनुभयो । रसुवाबाट पनि उद्वारका लागि सेना घटनास्थलमा पुगेको छ ।
त्यसैगरी पहिरोको कारण जिल्लाको ढुङ्गेमा पनि दुई ओटा घरमा क्षति पुगेको छ । साथै धारापानी, कटुन्जे र माँझगाँउमा समेत पहिरो खसेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन् ।
बेत्रावती भन्दा माथिको सडको बिच बिचमा पहिरो गरेको कारणा रसुवामा यातायातका साधन बन्द भएको छ । मोटरसाईकल मात्रै गुड्न मिल्ने गरि सडक भासिएकोले जिल्ला सदरमुकाम र अन्य गाउबाट आवतजावत बन्द भएको छ । रसुवागढी आवतजावत गर्ने मालबाहक साधन पनि रोकिएको छ ।
आज बिहानैबाट रसुवामा नुवाकोटबाट जाने सवारी साधन प्रबेशमा रोक लगाईएको छ । नुवाकोट र रसुवाको सिमास्थल बेत्रावतीबाट ठुला सवारी साधन रसुवा प्रबेश गरेको छैन ।
पैरेबेसी रसुवा । रसुवाको पहिरेवेशीमा गएराति पहिरो जाँदा ८ घर पुरिएको छ । चार जना वेपत्ता भएका छन् ।
बेपत्ता हुनेहरुमा एकई घरका सदस्य रहेका छन् । जसमा ७७ बर्षिय धर्मबहादुर थापामगर, ३३ बर्षिय बुहारी मुना थापामगर, ४ बर्षिय नाति रविन थापामगर र घरमा काम गर्ने ७८ बर्षिया भक्तबहादुर नगरकाेटि रहेका छन् ।
उत्तरगया गाउँपालिका–४ पहिरेबेशिमा राति ९ वजेतिर खसेको पहिरोको कारण ८ घर पुरिएको हो । स्थानिय खड्गबहादुर घले, मुना घले, दिपक घले, कान्छि मगर्नि, देवकि भुजेल, लालबहाखुर थापामगर, गाेपालबहादुर थापामगर, हरि घले र यवबहादुर थापामगरमकाे घरमा क्षति पुगेकाे छ ।
पहिराेमा परि लालबहाखुर थापा मगर र उहाको श्रीमति बिन्दा थापामगर घाइते हुनुभएको छ । बिन्दाकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
दर्जनौंकाे सङ्ख्यामा पशु पनि मरेकाे छ । गाउँ पुग्ने सडक समेत पहिलाेले बगाएको कारण उद्वारमा जानेहरुलाई समस्या भएको थियाे ।
बेपत्ताहरुकाे सेनाले खाेजि गरिरहेकाे छ । श्रीनाथ गण नुवाकोटबाट खटिएको सेनाले बेपत्ताहरुकाे खाेजि गरिरहेकाे र पहिराेकाे दलदलका कारण समस्या भएको श्रीनाथ गणका प्रमुख राेहित गुरुङले बताउनुभयाे । रसुवाबाट पनि उद्वारका लागि सेना घटनास्थलमा पुगेकाे छ ।
बेत्रावति भन्दा माथिकाे सडकाे बिच बिचमा पहिराे गरेको कारणा रसुवामा यातायातका साधन बन्द भएको छ । माेटरसाईकल मात्रै गुड्न मिल्ने गरि सडक भासिएकाेले जिल्ला सदरमुकाम र अन्य गाउबाट अावतजावत बन्द भएको छ । रसुवागढि अावतजावत गर्ने मालबाहक साधन पनि राेकिएकाे छ ।
अाज बिहानैबाट रसुवमा नुवाकोटबाट जाने सवारी साधन प्रबेशमा राेक लगाईएकाे छ । नुवाकाेट र रसुवाकाे सिमास्थल बेत्रावतिबाट ठुला सवारी साधन रसुवा प्रबेश गरेका छैनन् ।
तस्बिरहरु शशिकुमार डङ्गोल/इमेज र श्रीनाथ गण नुवाकोट
शर्मिला उप्रेती विदुर,
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ । जसअनुसार आज सोमवार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । समितिको पदाधिकारी चुन्नका लागि निर्वाचन भने साउन २९ आइतवार गते दिउँसो १ बजे हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा नै मुख्य निर्बाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरि निर्बाचन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । नुवाकोटका जिल्ला न्यायधिश एवं मुख्य निर्बाचन अधिकृत लोकजङ्ग शाहका अनुसार निर्वाचन मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनको विभिन्न १४ चरणमध्ये शुक्रबार मतदाता नामावली प्रकाशन, हिजो आइतवार अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको थियो । आज सोमवार भने उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उम्मेदवारविरुद्ध परेका उजुरी लगायतको प्रक्रिया पूरा गरी साउन २६ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन अधिकृत लोकजङ्ग शाहले जानकारी दिनुभयो । उम्मेदवारलाई साउन २८ मा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र मतदान साउन २९ गते तोकिएको मुख्य निर्बाचन अधिकृत लोकजङ्ग शाहले बताउनु भयो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्बाचनमा नगरपालीका र गाँउपालीकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने प्राबधान रहेको छ ।
यस्तै, निर्बाचनमा स्थानिय तहको निर्बाचनबाट निर्बाचित भएका पदाधिकारीमात्रै उम्मेद्धवार बन्न पाउने मुख्य निर्बाचन अधिकृत शाहले बताउनु भयो । नुवाकोटमा जिल्ला समन्य समितिको निर्वाचनका लागि १२ स्थानीय तहका प्रमुख र उप्रप्रमुख गरी २४ जना मतदाता छन् ।
२४ जना मतदातामध्ये १४ जना नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व जनाउने भएकाले काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । काँग्रेस जिल्ला प्रवक्ता राजु थापाका अनुसार जिससको सभापतिमा सन्तमान तामाङलाई उठाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । हिजो काठमाडौंमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सित केसी र महत पक्षले छलफल गरेपछि सभापति महतलाई, उप सभापति केसीलाई र बहादुरसिंह लामा तामाङलाई दुई सदस्य दिने मौखिक सहमती भएको हो ।
अन्य उम्मेदवाहरुको बारेमा भने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । १२ स्थानिय तहमा नेकपा एमालेका ६ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारजना मतदाता रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको जिल्ला कार्य समितिले जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिमा पदमराज पौडेललाई उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर नुवाकोटको तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट भने जिल्ला समन्वय समितिमा सन्तमान तामाङको नाम सिफारिस भएर आएको थियो ।
विदुर÷बट्टार बसर्पाक पुन सञ्चालनमा आएको छ । यस अघि पनि दुई पटक सञ्चालन हुँदै रोकिएको थियो । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा शहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजनाले ७ वर्षअघि १ करोड ८७ लाखको लगानीमा निर्माण गरेको बट्टार बसर्पाक व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
बसपार्क निर्माण भएर पनि पार्किङस्थलमा सवारीसाधन नजादा दुरुपयोग भएकाले बसपार्कमा सवारीसाधन अनिवार्य प्रवेश गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याइएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताउनु भयो । नुवाकोटको गौरबको रुपमा निर्माण भएको संरचनाको सदुपयोग नभई बजार पसिरमानै सबारी पार्क गर्दा बजार अब्यबस्थित भएकाले पुनः बसपार्कलाई सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो ।
साउन पहिलो साता यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको बैठकले बसपार्कभित्र अनिवार्य रूपमा सवारीसाधनको प्रवेश, टिकट काउण्टर, विदुर र बट्टारमा यात्रुलाई चढाउन र ओराल्न मात्र पाउने र त्यसको लागि बढीमा ५ मिनेट मात्र रोक्न पाइने नियम बनाइएको थियो ।
बसपार्क सञ्चालनको १ वर्षका लागि कम्तीमा ११ लाख आम्दानी हुनेगरी बोलपत्र
आह्वान गर्ने र ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभए सम्मका लागि यातायात व्यवसायीले एकमुष्ट हुनआउने रकम नगरपालिकालाई बुझाउने सहमतिको भएको थियो ।
नगरपालिकाले सुरक्षा व्यवस्थापन, खानेपानी, शौचालय, आवास तथा कार्यालय सञ्चालन गृहलगायत भौतिक संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिनु भयो ।
२०६८ सालमा निर्माण भए पनि २०७१ असार १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बसपार्कमा सवारीसाधनले प्रयोग गरेबापत प्रतिदिन लामो दूरीका बसले ३०, माइक्रोबस र स्थानीय मार्गमा सञ्चालन हुने मिनीबसले २५ कर तिर्न‘पर्नेछ ।
स्थानीय ४३ जना जग्गाधनीले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको ३५ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको बसपार्क सञ्चालनले बजार क्षेत्रमा यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी, दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी साधनको व्यवस्थित सञ्चालन, यात्रु वर्गलाई टिकट खरिद लागयतका सविधा हुने विश्वास लिइएको छ ।
विदुर÷नुवाकोट जिल्लाका विस्थापित तथा जोखिमयुक्त वस्ती र विस्थापित शिविरमा बसोबास गरेका परिवारलाई यथासक्य पुनर्वासको प्रक्रियामा अघि बढाइनु पर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
गत १२ बैशाख २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोट जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो । यस जिल्लामा १११२ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो । सरकराले नै तयार गरेको विवरण अनुसार नुवाकोट जिल्लाका ९५ प्रतिशत घरहरू पूर्ण क्षतिभएका छन् ।
मुख्य गरी प्रकोपसँग सम्बन्धित समस्या भोग्न बाध्य परिवारको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पक्षमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्दा पनि विनाशकारी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाई हुँदा बस्तीको पुनर्निर्माणले तिव्र गतिलिन नसकेको सामुदायिक आत्म निर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) नुवाकोटले जनाएको छ । जिल्लाको पुनर्निर्माणको अवस्थाले गति लिन नसक्दा भूकम्प प्रभावितको परिवारको अवस्था दयनियबन्दै गइरहेको केन्द्रका जिल्ला अभियान अधिकृत भोला बस्नेत बताउनुहुन्छ ।
भूकम्पको मारमा अझ बढी सानाकिसान, सुकुमबासी, ग्रामीण किसान, दलित र भूमिहीन परेको केन्द्रले जनाएको छ । उनीहरूसँग आफ्नो बासथलो निर्माण गर्न सक्ने क्षमता नभएको, आर्थिक हैसियत कमजोर रहेको छ । २८ महिनासम्ममा पनि जोेखिमयुक्त बस्ती र विस्तापित परिवारको पक्षमा पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै केन्द्रले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।
सामुदायिक आत्म निर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) नुवाकोटका जिल्ला अभियान अधिकृत भोला बस्नेतका अनुसार पुनर्निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, महिला किसान, ग्रामीण किसानहरूलाई राख्नुपर्ने छ ।
यस्तै, नुवाकोट जिल्लाको साविकको विकट गाविस लच्याङ्ग, घ्याङ्फेदी, शिखरबेसी, गोस्र्याङ, चारघरे, खड्भञ्ज्याङ, रातमाटे, जिलिङ, दुईपीपल, गणेशस्थान, गेर्खु लगायतमा ६ हजार ७ सय २३ परिवारसँग आफ्नो नाममा जग्गा धनी पुर्जा नरहेको बताइएको छ । पुर्जा नभए पनि कतिपयले सम्झौता भएर पनि आफ्नो नाममा सुरक्षित घर बनाउने जमिन नभएकोले घर बनाउन नसकेको बस्नेतलले जानकारी दिनुभयो । ‘धेरै परिवारसँग पुर्जा नभएकै कारण सम्झौता हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
भूकम्पपछि अति जोखिम स्थानहरूका केही नागरिकहरूले राहत पाएपनि उनीहरूले सुरक्षित जमिनको अभावमा घर निर्माण सुरु नगरेको बताइएको छ । जसमा लच्याङको २१, साल्मेको ४, किम्ताङको ६०, कल्याणपुरको १५, उर्लेनीको ७७, महाकालीको २३, घ्याङ्फेदीको ७२, गोरस्र्याङको ६, कुमारी २४ रहेको छ ।
यसै बीच, नुवाकोटको जोखिम बस्तीबाट तथा भूकम्पबाट प्रभावितभई सुरक्षित स्थानखोजी गरी छिमेकी जिल्ला रसुवा, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकबाट पनि नुवाकोटका नागरिकमा बसोवास रहेको सामुदायिक आत्म
निर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) नुवाकोटले जनाएको छ । केन्द्रका जिल्ला अभियान अधिकृत भोला बस्नेतका अनुसार मनाकामनाको शान्तिबजारमा रसुवाका विस्थापित २६ जना, किम्ताङको कालाञ्चिटोलमा किम्ताङको पहिरो पीडित २१ जना, बेतिनीको गोल्फुभञ्याङमा स्थानीय ८३ परिवार, पिपलटारको इनारपाटीमा रसुवावाट विस्थापित ८३ परिवार, विदुरको सिम्मुटारमा नुवाकोट र रसुवाका गरी १२१ परिवारको अस्थायी बसोवास रहेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा २८ महिनादेखि अस्थायी रुपमा बस्दै आएइकोहरूमा रसुवाको हाकुका ४५ परिवार, नुवाकोट भाल्चेका १८ परिवार, लच्याङका १७ परिवार, देउरालीका ५ परिवार, किम्ताङका ४, मनाकामनाका २, चारघरेको १, बुङताङको १, गेर्खुका ३, सामरीका २, काहुलेको १, नर्जामण्डपका २, विदुर नगरपालिकाकै २ घरपरिवार रहेका छन् ।
सामुदायिक आत्म निर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) नुवाकोटका अनुसार बेत्रावटीको सातबिसेमा ३० घरपरिवार रसुवाबाट सरेर बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूको तत्काल घर बनाउने सुरक्षित जमिन नभएसम्म पुरानो शिविर नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ । ‘यी परिवार शिविरमा बसोबास गरिरहनुपर्दा धेरै समस्याहरू भोग्न बाध्य छन्, केन्द्रका जिल्ला अभियान अधिकृत भोला बस्नेत भन्नुहुनछ– ‘यस्ता समस्यामा भएको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गर्न गराउनका लागि पहल तथा सहजीकरण गरिनु आवश्यक देखिएको छ ।’
विदुर÷बिनासकारी भुकम्पका कारण क्षति ग्रस्त भएको संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा नुवाकोटका नागरिकहरूले बिभिन्न समस्या झेलि रहेका छन् ।
संरचना निर्माण सुरु गरेका नागरिकह्रूले आर्थिक अभाबसँगै, निर्माण सामाग्री र संरचना निर्माण कर्मिहरूको अभाबमा बस्नु परेको छ । लामो समय सम्म अस्थाई आबासमा बसेर भर्खरै संरचना निर्माण कार्यमा जुटेका नागरिकलाई स्थानिय स्तर सम्म मोटर बाटो सञ्चालन नँहुदा निर्माणजन्य सामाग्री ढुवानीमा समस्या छ ।
घर सम्म पुग्ने मोटरबाटो बर्खाको समयमा क्षतिग्रस्त हुँदा निर्माण सामाग्रीहरू संरचना निर्माण स्थलसम्म पुराउन नागरिकहरूले पाएका छैनन् । नुवाकोटको ग्रामिण भेगहरू दुप्चेश्वर, साल्मे, भाल्चे लगायतका स्थानहरूमा सामाग्रीहरू ढुवानी हुन नसक्दा धेरै नागरिकहरूको संचना निर्माण कार्य अधुरै भएको छ ।
प्राय निर्माण जन्य सामाग्री ढुवानीको लागी मिनि ट्रकको प्रयोग हुने गरे पनी ग्रामिण मोटरबाटो बर्खाको पानीले खोलेका कारण सबारी आबागमन बन्द भएको हो । सबारी साधन निर्बाध रुपमा सञ्चालन भैरहेका स्थानहरूमा पनि निर्माण सामाग्रीहरूको अभाब भएको छ ।
संरचना निर्माणको लागी आबाश्यक पर्ने सबै सामाग्रीहरू समयमा नै उपलब्ध नभएका कारण नागरिकले निर्माण थालेको घरहरू पनि अधुरै रहेको छ । बर्खा अगाडी नै घर निर्माण गरि सक्ने लक्ष्य राखेका भुकम्प प्रभाबित नागरिकहरूको समेत निर्माण सामाग्रीको अभाबका ाकरण अहिल सम्म संरचना अधुरै छ ।
बिदुर÷सचेतन सामुदायिक सिकाई केन्द्रको ११ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।
साधारण सभाले समाज सचेतन केन्द्र र सचेतन समुदायिक सिकाई केन्द्रले आफ्नो जन्मकाल देखी नै साझेदारीरुपमा सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोले सामुदायिक साझेदारी बहुउद्देश्यीय भवनको सम्पूर्ण लागत खर्च सार्वजनिक गरेको छ ।
२०५६ मंसिर २७ गते देखी नागरिक स्तरमा एक हजार भन्दा माथीको रकम लगायत सरकारी स्तर बाट अनुदान रकम संकलन गरिएको थियो । २०७३ असार मसान्तसम्म भए गरेका कामको समिक्षा सहित हर हिसाव सार्वजनिक गरी आम्दानी खर्चको साधारण सभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
केन्द्रले ७ सय २० जना र सरकारी नियबाट ४६ लाख ९२ हजार चार सय ३५ सङ्कलन गरेको थियो । यस्तै कार्यक्रममा सचेतन सामुदायिक सिकाई केन्द्रका सामाजिक परिचालक बिना खातीले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को ३ लाख एक हजार आठ सय रुपैयाँको आर्थिाक आयव्यय र आगामी आर्थिाक वर्षको भावी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रमहरूमा निरन्तर शिक्षा ४ महिने, सिलाइ कटाई ५० जनालाई साधरण सभाले ३ महिने प्रजनन स्वास्थ्य तालिम, ३४ वटा समुह परिचालन, हितकोष सञ्चालन र पुस्तकालय व्यवस्थापन लगायत कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव पेस गरेकोे छ ।
साधारण सभामा विदुर नगपालिका वडा नं ४ का वडाअध्यक्ष टलकमान श्रेष्ठले आफ्नो वडाको तर्पmबाट गर्न सकिने सहयोगका कार्यक्रमहरू साझेदारी रुपमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यस्तै, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठिमि र जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटको सहयोगमा अभिमुखीकरण तालिम, पुस्तकालय सुदृढीकरण सुचना तथा सञ्चार प्रबिधी कक्ष विकास संस्कृति विकास प्रतियोगात्मक व्रिmयाकलाप र प्रकाशन एवँ परम्परागत घरेलु उपचार पद्दती सामग्री विकास र प्रकाशन साझेदारी रुपमा गरिने कोषाध्यक्ष काशिराम श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।
सचेतन सामुदायिक सिकाई केन्द्रका अध्यक्ष पशुपती कोइरालाको सभापतितवमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रको संस्थापक अध्यक्ष यमकुमार खाती, समाजसेबी रामहरीप्रसाद रिमाल बाजे, सस्थापक सदस्य हिकमतबहादुर अधिकारी लगायतले मन्तव्य राख्नुभयो ।
राजु रिमाल, विदुर
नुवाकोटमा एसियाली बिकास बैङकको सहुलियत श्रणमा सञ्चालीत तेश्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनाको हाल सम्मको प्रगती बिवरण ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
योजना कार्यान्वयन सुरु हुनै समय लागेको तेश्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनाको काम भने तिब्र रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । गएको सामेवार बिदुर खानेपानी उपभोक्ता समितिले सरकारवाला निकायहरूसँग आयोजना कार्यान्वयनको कार्य प्रगति र चनौतिको बिषयमा अन्तक्रिया गर्दै खानेपानी आयोजना तिब्र रुपमा अगाडी बढिरहेको जनाएको छ ।
करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भैरहेको आयोजनाको अहिले ५५ प्रतिबत भन्दा माथी काम सम्पन्न भैसकेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणबहादुर खनालले बताउनु भयो ।
खानेपानी आयोजनाको संरचना निर्माणको क्रममा मुहान निर्माण, पानी रिजर्भ गर्ने ट्याङिक, बितरण लाईन, पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रबिधि जडान र संरचनाको निर्माणलाई अहिले अगाडी बढाईएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खनालले बताउनु भयो । सरोकारवाला सबै निकायहरूको सहयोग र सहकार्यमा हाल खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य तिब्र भैरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
खानेपानी आयोजना निर्माणको कार्यमा धेरै चुनौतीहरू रहेता पनि स्थानिय नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहयोगमा चुनौतिहरूलार्य अबसरमा परिणत गरिएको समितिका अध्यक्ष नारायणबहादुर खनालले बताउनु भयो । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सुरुमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सबै निकायबाट सहयोग प्राप्त भएकाले अहिले स्थानिय उपभोक्ता नागरिकहरूको मकै, धान लगाईएको स्थानबाट पाईप लाईन बिस्तारमा समेत स्थानिय उपभोक्ताहरूको सहयोग रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
आगामी १ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने खानेपानी आयोजनाले बिदुर नगरपालीकामा आगामी १५ बर्ष सम्मको लागी प्रत्येक नागरिकहरूको घरमा २४ सै घण्टा पानी उपलब्ध हुने बतार्यको छ । यस्तै, सडक मार्ग बिस्तारका कारण नगरपालीका भित्र ६ किलोमिटरमा तत्कालै पाईप लाईन बिस्तार गर्न नपाईएको कार्यक्रममा बताईएको छ ।
गल्छि रसुवागढी सडक बिस्तारको क्रममा रहेकाले पाईपलाईन कहाँनिरबाट बिस्तार गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेको बिदुर खानेपानी उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
बेत्रावती÷नुवाकोट र रसुवालाई जोड्ने बेत्रावतीमा रहेको ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल शुक्रवार रातीको बाढीले बगाएकोे छ ।
फलाखु खोलामा आएको बाढीले पुलको नुवाकोट तर्फको भाग बगाएको हो । बिदुर नगर पालिका वडा नम्वर १० को पुलको एकापटिको जीप नै बगाएपछि खोला वस्तीमा पस्ने खतरा बढेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
फलाँखु खोलामा आएको बाढीले धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र बेत्रावतीको ऐतिहासिक झोलुंगे पुल बगाएपछि खोला वस्तीमा पस्न सक्ने खतरा बढेको छ । पुलको नुवाकोटपटिको भाग भत्काएकोले तत्काल खोला नियन्त्रण नगर्ने हो भने पुलसँगै जोडिएको घरहरू समेत भत्काउन सक्ने स्थानीयले बताए ।
पुल बगाएपछि खोलाको बहाव नुवाकोटपटि बढी आएकोले वस्ती जोखिममा परेको स्थानीय गोसाईकुण्ड क्लबका अध्यक्ष सुरज लबटले बताउनुभयो ।
७० वर्ष भन्दा पुरानो यो पुल पक्की पुल बनेसगै पल्लिो केही दशकदेखि प्रयोगविहीन अबस्थामा थियो । तर, आफ्नो क्षेत्रको ऐतिहासिक पुलको संरक्षण गर्न‘ पर्छ भन्दै केही वर्ष अघि पुल मर्मत गरिएको थियो । स्कटल्याण्ड सरकारबाट नेपाललाई तीनवटा पुल निर्माणमा र्पुयाएको सहयोग कार्यक्रम मार्फत वि. सं. २००४ मा निर्माण भएको यो पुलले नेपाल र चीनबीचको पदमार्गको सम्पर्क विस्तारमा सहयोग पु¥याएको थियो । यो पुल रसुवा जिल्लालाई बाहिर जिल्लासँग जोड्ने पहिलो पुल हो । उक्त पुलको निर्माणपछि रसुवाको रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ बजारसम्मको व्यापार फस्टाएको थियो ।
यस्तै बाढीले भोर्लेमा सयौं रोपनी खेत बगाएको छ भने एक झोलुंगे पुल समेत बगाएको छ ।
विदुर÷आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नुवाकोट आएको दुई अर्ब ४९ करोड ९३ लाख बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख दामोदर थापाका अनुसार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न प्राप्त चालुगत र विकास निर्माणका लागी विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च १३ अर्ब तीन करोड चार लाखमध्ये १० अर्ब ५३ करोड ११ लाख खर्च भएको छ ।
जिल्लाका ७६ सरकारी कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नौ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख प्राप्त भएकामा ८६ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब सात करोड ८८ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालुगत शीर्षकमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको अख्तियारी पाएका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ३८ करोड नौ लाख खर्च गर्न सकेका थिएनन् ।
पुँजीगत शीर्षकमा विकास निर्माणका लागि आएको तीन अर्ब ५७ करोड सात लाखमध्ये दुई अर्ब ४५ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । बजेटको एक तिहाइ अर्थात् ६७.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकासका लागि प्राप्त एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख खर्च नभई फिर्ता भएको छ । प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती सडक विस्तार, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, भूकम्प पुनःनिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई लगायत जनतालाई प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा सेवा पु¥याउने कार्यालय छन् ।
विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेको खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटमा भएको खर्च मध्ये ९५ करोड २३ लाख (एक तिहाइ) असारमा खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
विदुर÷नुवाकोटमा नदी जन्य निर्माण सामाग्रीहरूको मुल्य निर्धारणको लागी समिति गठन भएको छ ।
समितिको संयोजकमा बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्ररमण खनाल रहनु भएको छ । यस्तै सदस्यहरूमा क्रसर ब्यबसायी संघ नुवाकोटका अध्यक्ष शिब अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कायालय नुवाकोटका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख बेदप्रसाद गौडेल, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका ईन्जिनियर, शहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियर, बालुवा प्रशोधन ब्यबसायीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी रहनु भएको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर पण्डित, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेब खनाल र जिल्ला समन्वय समितिका सुब्बा हरी प्याकुरेल सदस्य सचिब रहनु भएको छ ।
मुल्य निर्धारण समितिले निर्माण जन्य सामाग्रीहरूको प्रस्ताबित मुल्य निर्धारण गरि सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा पेश गर्ने जनााएको छ । समितिलाई सात दिनको मिति दिइएइको छ । मुल्य निर्धारणको लागी बिहिवार भएको कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको आबाश्यक्ता अनुसार उत्पादन भएका सामाग्रीहरू जिल्लामा नै खपत गर्नको लागी ब्यबसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भयो
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशरबहादुर पण्डितले जिल्लामा रहेका क्रसर ब्यबसायीहरूले अबैध रुपमा नदी उत्खनन् गर्ने भएकाले तस्करको संज्ञामा परेको बताउनु भयो । बिदुर नगरपालीकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले राज्यले रोक लगाएको समयमा अबैध तबरले रातको समयमा नदी जन्य सामाग्रीहरूको उत्खनन् रोकिनु पर्ने बताउनु भयो । साथै भुकम्प पिडितहरूलाई पुन निर्माणका लागि सस्तो र सहज रुपमा सामाग्री उपलब्ध गराउनको लागि लाग्ने उहाँको भनाई छ ।
बेल्कोटगढी नगरपालीकाका प्रमुख राजेन्द्ररमण खनालले नदी जन्य निर्माण सामाग्रीहरूको मुल्य निर्धारण गरि नुवाकोटमा रहेका भुकम्प प्रभाबित नागरिकलाई सहज रुपले उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो । नदी जन्य निर्माण सामाग्रीहरू असार, साउन र भदौ महिनामा उत्खनन् गर्न नपाउने संबैधानिक ब्यबस्था रहेको छ । तर नुवाकोटमा बर्खाको समयमा नै अबैध तबरले नदी उत्खनन् भैरहेको सरकारी कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् । प्हरीले पनि नदीमा बालुवा झिक्न प्रयोग भएको मेसिनको ब्याट्री जफत गर्दै आएको छ ।
तर उद्योगी ब्यवसायीहरूले भने आफुहरूलाई विक्रिको सहज वातावरण बनाइदिएर निर्धारण भएको मुल्य भन्दा पनि प्रति गाडी एक हजार रुपैयाँ कम मुल्यमा सामग्री उपलब्ध गराउने बताएका छन् । ब्यवसायी प्रकाश राईले प्रहरी प्रशासनले बालुवा गिट्टी उत्पादन र संकलन गर्न पनि नदिने र मुल्य कम गर्नु पर्यो पनि भन्ने कुरा विरोधाभाष रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहजत वातारण भएका आफ्नो तर्फबाट जिल्लावासीलाई अपेक्षा भन्दा पनि सस्तो मुल्यामा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ ।
बालुवा प्रशोधन ब्यबसायी कृष्ण अधिकारीले करोडौै रुपैयाँ लगानी गरी स्थानियहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गरि ब्यबसाय सञ्चालन गरि रहदा तस्करको आरोप लागेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । कार्यक्रममा किस्पाङ गाँउपालीकाका अध्यक्ष छत्र तामाङले क्रसर र बालुवा ब्यबसायीहरूप्रति जिल्ला स्थित नियामक निकायले नियन्त्रणमा लिएको जस्तो गरि भित्रि रुपमा रकमको चलखेल गरेर उत्पादन भएको निर्माण जन्य सामाग्रीहरू नुवाकोटको दुर दराजमा रहेका नागरिकहरूको पँहुचमा नपुगेको बताउनु भयो । भुकम्पका कारण अक्रान्त भएका नागरिकहरूको निजि घर पुनःनिर्माणको लागी १ ट्रिपर बालुवा किन्दा करीब ४० हजारको हाराहारी सम्म पर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
तादी वडा नं. ६ का अध्यक्ष केशब थापाले बर्खाको समयमा जिल्ला समन्वय समितिले नै नदीमा बगेको बालुवा उत्खनन् गरि भुकम्प प्रभाबित नागरिकलाई सहज रुपले उपलब्ध गराउन
माग गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिले नदी जन्य सामाग्री उत्खनन्मा रोक लगाउदै आएको छ । यता, क्रसर ब्यबसायीहरूले पनी रातमा नदी उत्खनन् गर्नु पर्ने आफुहरूको बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरि सञ्चालन गरेको क्रसर ब्यबसाय स्थानिय प्रशासनले धारासायी बनाएको भन्दै दिनको समयमा निर्बाध रुपमा नदी जन्य सामाग्री उत्खनन् गर्नको लागी सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् ।
निर्बाध रुपले जिल्ला समन्वय समिसितले नदी जन्य सामाग्रीहरूको उत्खनन् गर्ने ब्यबस्था भएमा भुकम्प प्रभाबित नागरिकह्रूले सहज र सुलभ दररेटमा निर्माण जन्य सामाग्रीहरू पाउने ब्यबसायीहरूले बताएका छन् ।
विदुर÷मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार अभियोगमा गएको साता पक्राउ परी दुईवटा मुद्दा खेपिरहेका घ्याङफेदीका कुमार तामाङमाथि थप एक बालिकालाई भारतमा बिक्री गरेको किटानी जाहेरी परेको छ ।
दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ साबिक घ्याङफेदी ७ का १८ वर्षीय तामाङविरुद्ध नुवाकोटको एक बालिकालाई गत वैशाख अन्तिम साता भारतमा लगेर बिक्री गरेको भन्दै पीडित परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । तामाङले फकाएर राम्रो काम लगाइदिने भन्दै वैशाख १५ गते काठमाडौँ लगेको र वैशाख अन्तिम सातादेखि बालिका सम्पर्कमा नआएपछि खोजी गर्ने क्रममा भारतमा पु¥याएको पीडित परिवारले दाबी गरेका छन् । बालिकालाई भारतको वेश्यालयमा बिक्री गरेको भन्दै तामाङविरुद्ध किटानी परेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरु गरेको नुवाकोट प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
बालिकालाई भारतमा बिक्री गर्न लैजाने अन्य सहयोगीको समेत खोजी भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी हिरासत कक्षमा रहेका तामाङ यसअघि नुवाकोटको २३ वर्षीया महिलालाई भारतमा बिक्री गर्न लैजाँदै गर्दा अन्य तीनजना सहयोगी सहित पक्राउ परेका थिए ।
तामाङ पक्राउ परेपछि नुवाकोटका दुई महिला पनि बिक्री गरेको भन्दै पीडित परिवारले किटानी जाहेरी
दिएकाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी दुई मुद्दा यसअघि नै दर्ता भएर कारबाहीका लागि प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको जिल्ला प्रही कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
नुवाकोटको घ्याङफेदी र आसपासको क्षेत्रका तामाङ समुदायका बालिका तथा महिला अशिक्षित तथा बेरोजगार भएकाले गाउँकै दलालले भारतस्थित वेश्यालयमा बिक्री गर्ने अपराध लामो समयदेखि विद्यमान छ ।
विदुर÷निर्वाचन आयोगले आउदो निर्वाचनको लागि फोटो सहितको मतदाता नामावलीको लागि फोटो खिचाउन खुल्ला गरेपछि नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको भीड लागिरहेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले मतदातामा उत्साह वढेका कारण मतदाता नामावलीमा फोटो खिचाउनेको भीड निकै लागेको जनाएको छ । तीन साताको अवधि नुवाकोटमा ७ हजार २ सय २१ जनाले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको कार्यालय प्रमुख जनार्दन अधिकारीले वताउनुभयो । फोटो खिचाउने मध्ये ४० प्रतिशत महिला रहेका छन् । एकसय २६ जनाले मतदान केन्द्र ठाउं सारेको र १३ जनाले त्रुटी सच्याएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक चारसय हाराहामीमा फोटो खिच्ने काम भइरहेको छ ।
जिल्लाभरमा १२ थानमा फोटो खिचाउने काम भइरहेकोमा मतदाताहरूको भीड लागेको फोटो सहितको मतदाता नामावली अद्याबधिक गराउने नागरिकको संख्या बढेको जिल्ला निर्बाचन कार्यालयले जनायो । २५ कर्मचारी नामावली संकलनमा खटिएका छन् । निर्वाचन कार्यालयले कर्मचारी मार्फत साउन १६ गतेदेखि ३२ गतेसम्म हरेक गाउँ तथा नगरपालिकामा गएर फोटो खिच्ने कार्य गरिरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जनार्दन अधिकारीले बताउनुभयो ।
पोषण अधिकृत, युनिसेफ नुवाकोट
विश्वका १२० भन्दा बढी राष्ट्र«हरूमा यो हप्ताअर्थात अगस्त १–७ सम्म विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्व स्तनपान दिवस मनाइदैछ । हाम्रोे देशमा पनि ‘सबै मिली स्तनपानलाई दिगो बनाऔं’ भन्नेमूल नाराका साथ स्तनपान सप्ताह मनाईरहेका छांै ।
स्तनपानको मूल सन्देश भनेकै बच्चा जन्मेको जति सक्दो छिटो वा १ घण्टा भित्र स्तनपान गराउनू्, पूर्ण स्तनपान अर्थात ६ महिना पूरा नभएसम्म आमाको दूध मात्र चूसाउनू –पानी पनि दिनू पर्दैन) र बच्चा ६ महिना पूरा भएपछि थप पौष्टिक आहारा सुरु गरि कम्तीमा २ बर्ष सम्म आमाको दुध पनि खुवाई राख्नु हो ।
आमाको दुध बच्चाको लागि अमृत समान हो । सूरुमा आउने विगौती दूधमा बिभिन्न रोगहरूसंग लड्ने प्रतिरोधात्मकतत्व हुन्छ जसले बच्चाहरूलाई झाडा पखाला, श्वासप्रश्वास र अन्य संक्रमणबाट बचाउछ ।
सजिलै पचाउन सक्ने आमाको दुधले शिशुको बृद्दि विकासमा ठूलो मद्दत पु¥याउछ । पूर्ण स्तनपान गराएको वच्चाको बौद्धिक विकास पनि राम्रो हुन्छ । वाल मृत्युदर कम गर्ने १५ कार्यक्रम मध्ये स्तनपान नं १ मा राखिएको छ । जसबाट वाल मृत्यूदर लाई १३ प्रतिशत ले कम गर्न सकिने सन् २०००८ मा लेन्सेटमा सिरीजमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बच्चाको लागि आमाको दुध जति पोषिलो र उत्तम खाना संसारमा कुनै पनि चिज बनेको छैन । स्तनपान गराउने स्वयम आमाको लागि पनि यो त्यतिकै हितकर छ । जन्मिने वित्तिकै दुध चुसाउदा सालनाल बाहिर निस्कन र सुत्केरी पछि हुने रक्तश्राव कम गराउन सहयोग पुग्दछ । पाठेघरलाई पहिलेकै ठाउमा फर्कन सहयोग गर्नुको साथै स्तनपान गानिने र स्तनको नली वन्द भई हुने समस्याबाट बचाउँछ । पूर्ण स्तनपान साथै २ बर्ष सम्म स्तनपान गरेको बच्चामा रोग लाग्ने दर कम हुनुको साथै आमाको पनि स्तन र पाठेघर को क्यान्सरको सम्भाबनालाई कम गराउछ ।
हाम्रो देशमा स्तनपान को अवस्था ः
जन्मेको १ घण्टा भित्र आमाको दुध चुसाउने बच्चाको संख्या १५ बर्ष अगाडि (नेपालको जनसांख्यीक स्वास्थ्य सर्बेक्षण २००१ अनुसार २५ प्रतिशत मात्रै थियो । तर आज आएर यो संख्या ५५ प्रतिशतमा पुगेको छ । तर दुखःलाग्दो कुरा त्यति बेला ६८ प्रतिशत रहेको पूर्ण स्तनपान (६ महिना सम्म आमाको दुध मात्र ख्वाउने) को अवस्था ६८ प्रतिशत बाट घटेर अहिले ६६ प्रतिशत (नेपालको जनसांख्यीक स्वास्थ्य सर्बेक्षण २०१६) पुगेको छ । यो तथ्याङ्क ले के देखाउछ भने ः विकास संगसंगै पूर्ण स्तनपान गर्ने बच्चाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । शिशू तथा वाल्यकालिन पोषण रणनीतिले सन् २०२० सम्ममा यसलाई ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्य प्राप्तीको लागि उपलब्ध कार्यक्रम र नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन पपछि धेरैजसो काम कर्तब्य र अधिकारहरू स्थानिय तहमा गईरहेको सन्दर्भमा स्तनपानको लागि सहयोग, प्रर्बद्धन र संरक्षण गर्न स्थानिय सरकारले नै पहल गर्नूपर्ने देखिन्छ । यसको लागि निम्न कुराहरूमा ध्यानदिनु पर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ ।
१. आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रि वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ तथा नियामावली २०५१ लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजभोली आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु जस्तै पाउडर दुध, फरमुलामिल्कको बिक्रिबितरण र प्रयोग अत्याधिक भइरहेको छ ।
पढेलेखेका र शहरिया परिवारहरू पनि सजिलोको लागि पाउडर दुध ख्वाउने र कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले सूरुमै नवजात शिशुलाई पाउडर दुध ख्वाईदिने चलनले गर्र्दा ऐन नियमको कार्यन्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । साथै जन चेतनाको पनि अभाव दखिन्छ । यो ऐनलाई कडाइका साथ आप्mनो ठाउँ, अस्पताल र अस्पताल परिसरमा लागू गर्न स्थानिय सरकारले सरोकारवालासंग समन्वय गर्दै अघि बड्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
२. बालमैत्री अस्पतालको अवधारणा (द्यबदथ ँचष्भलमथि ज्यकउष्तब िक्ष्लष्तष्बतष्खभ) लाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशका सबै अस्पताल र बर्थिग सेन्टरबाटै स्तनपानको सूरुवात गराई स्तनपान सम्बन्धि शिफारिस गरिएका ब्याबहारहरू लागु गराउनुपर्छ । सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्तनपान व्यबस्थपनको तालिम दिने र आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु जस्तै पाउडर दुधको प्रयोगलाई निरुत्साहित गनुपर्ने दखिन्छ ।
३. महिला कर्मचारीलाई प्रशुती बिदाको सूबिधा ६० दिनबाट बढाई अन्तराष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार ६ महिना बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
४. निजी संस्था, बिद्यालय, गैर सरकारी संस्थाहरूमा प्रशुती बिदालाई सुनिश्चत गर्न पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजपनि दिदीबहिनीहरू सुत्केरी भएपछि जागिरबाट निकालिने र गर्भवती भएपछि जागिर नै नपाउने तितो यथार्थ हामीले देखिरहेका छौ । जसले गर्दा बच्चा जन्मिएको १ महिना नपूग्दै काममा जानुपर्ने बाध्यताका कारण कयौं शिशूहरू पूर्ण स्तनपानबाट बन्चित रहेका छन् ।
५. सूरक्षित स्तनपान क्षेत्र र स्तनपानको समय छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि हरेक सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, निजी संस्था र सार्बजनिक ठाँउहरूमा स्तनपान गराउने ठाँउ र कामकाजी महिला कर्मचारीहरूलाई स्तनपान गराउने समय ब्रेक छुट्याएर स्तनपानलाई सहयोग र प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
६. यसका लागि हाम्रौ जस्तो यो समुदायमा ब्यापक जनचेतनाको खााचो देखिएको छ । सामाजिक बानी ब्यबहारमा परिबर्तन गर्न समूदायका आमाहरू, सासूहरू, अगुवाहरूको बीचमा तथा नीति निर्माता तहसम्म आबश्यक छलफल र बहश चलाउनुपर्छ ।
आमसञ्चारका माध्यमहरूले स्तनपान सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धी गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । स्तनपानको सहयोग, प्रबद्र्धन र संरक्षणको लागि परामर्श समूह बनाइ हरेक समूदायमा स्तनपानको महत्व, बच्चा र आमाको सहि आशन, स्तनसम्पर्क र सिफारिश गरिएका ब्यवहार बारे छलफल र परामर्श लाई ब्यापक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैले सरोकारवाला निकायहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवि, स्थानिय सरकार र आमनागरिकहरू सबै मिलेर स्तनपानलाई दिगो बनाउन आजै देखि लागि परौं ।